SADDEX-XAGALKA DHAGARAHA GEESKA AFRIKA!! W/Q: Xuseen Adan Cige (Deyr) |
SADDEX-XAGALKA DHAGARAHA GEESKA AFRIKA!! W/Q: Xuseen Adan Cige (Deyr)
Gobolka Geeska Afrika, waxa la odhan karaa waa gobolka ay ugu badan yihiin xasaradaha iyo colaadaha hubaysan ee ka dhaca dacallada dunida.
Dalalka lagu tilmaansado Geeska Afrika, oo kala ah (Soomaaliya, Itoobiya, Djibouti, Eretariya, Sudan, Koonfurta Sudan iyo Somaliland), marka taariikhda dib loo raaco, dal walba waxa ka dhacay ama haatan ka socda colaado salka ku haya nacayb xagga Isirka ah ama mid Qoomiyadeed, mid qabiil, mid Dhul-ballaadhsi, mid xagga khayraadka ah iyo murano taariikhi ah oo ka dhashay xuduudihii ay jeexeen Quwadihii reer Yurub ee Afrika Gumaystay.
Colaadaha ka dhaca Gobolka Geeska Afrika waxa kale oo ay salka ku hayaan xaq darro, eex, caddaalad la’aan, cadaadis iyo isir-beegsi lagula koco qaybo ka mid ah bulshooyinka iyo shucuubta ku wada nool Waddamada Gobolka.
Sidoo kale, arrimaha huriya colaadaha ka dhacay, ka dhacaya ama ka dhici doona Geeska Afrika waxa ka mid ah: hoggaan xumo, maamul xumo, musuqmaasuq, keli talisnimo, dayn qaran oo culus, fakhri baahsan iyo fara-gelinta shisheeye.
HALISTA HAATAN KA TAAGAN GEESKA AFRIKA IYO TA KU SOO FOOL LEH!
Itoobiya oo ah dalka 2-aad ee ugu miisaanka weyn Qaaradda Afrika (dal ahaan, dad ahaan iyo taariikh ahaanba) waxa waqtigan xaadirka ah ka holcaya dagaallo sokeeye oo lagu riiqmay, kuwaasoo sababay khasaare laxaad leh oo naf, maal iyo moodba leh.
Dagaallada ka dhacaya Itoobiya waa kuwo halis weyn ku ah nabada, xasiloonida iyo horumarka Waddamada ku yaalla mandaqadda Geeska Afrika.
Ka sokow colaadaha sokeeye ee ka holcaya Itoobiya muddo ka badan sanad, iyo saamaynta xun ee ay ku leeyihiin nolosha shucuubta ku nool dalka Itoobiya, halista haatan ka taagan Geeska Afrika maaha mid dibada uga timid ama ay ku hayaan quwadaha shisheeye ee ku loolamaya in ay hantaan Gobolka Geeska Afrika oo ah gobol ku yaalla buqcad isteraatiji ah oo muhiim u ah isu socodka ganacsiga Caalamka.
Halista ugu weyn ee Colaadaha haatan ka taagan Geeska Afrika waxa sabab u ah hoggaamiyeyaasha dalalka Geeska Afrika kuwaasoo ku fashilmay in ay la yimaadaan maamul hufan iyo hannaan dimuqraadi ah oo ku dhisan rabitaanka shacabka. Saddexda hoggaamiye ee halista ku ah Xasiloonida Gobolka Geeska Afrika ayaa kala ah: Isaias Afwerki (Eretariya) Abiy Axmed (Itoobiya) iyo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo (Soomaaliya).
Hab-dhaqanka saddexdan nin iyo qaabkooda hogaamineed ee ku salaysan kali-talisnimada ayaa sababay dhimashada boqollaal kun oo qof iyo bara-kaca iyo macaluusha malaayiin qof. Tusaale cad waxa inoogu filan hoggaamiye Afrikaan ah oo in ka yar laba sano gudohood ku guulaystay Billada Nabadda Aduunka, hadana sanad ka dib dadkiisii xasuuqay!!
HESHIIS DHAGAREED QORSHAYSAN:
Saddexdan hoggaamiye waxay khatar weyn ku yihiin nabada, xasiloonida, wada-noolaanshaha iyo horumarka Gobolka Geeska Afrika.
Waxa jira Heshiis Dhagareed Qorshaysan oo dhex maray saddexdan hoggaamiye oo ay ugu magac dareen Heshiiska Iskaashiga Geeska Afrika (the Horn of Africa Cooperation (HoAC). Ujeedada ugu weyn ee ay ka leeyihiin Heshiiskan waxa ka mid ah:
1. In gebi ahaannba Dalalka ku yaalla Geeska Afrika lagu soo dabaalo xayndaabka Heshiiska Saddex-xagalka ah ee ay saddexdan hoggaamiye horseedka ka yihiin. Sidoo kale in cadaadis la saaro loona caga jugleeyo Waddamada u hanqal-taagaya hannaanka Dimuqraadiyada,
2. In ay noqdaan mulkiilayaasha, maamuleyaasha iyo kuwa ku amar-ku-taagleeya Biyaha Wabiga Niilka, Marrinka Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed,
3. In aad loo dhimo saamaynta iyo nooc kasta oo dano ah oo ay reer Galbeedku ku leeyihiin Gobolka Geeska Afrika,
4. In lala dagaalamo lagana hortago fara-gelinta qaawan ee ay Reer Galbeedku ku hayaan arrimaha gudaha ee Waddamada Qaaradda Afrika,
5. In laga jeesto ku tiirsanaan-shihii Eer Galbeedka ee Qaaradda Afrika, haatan wixii ka dambeeyana la dhiso heshiisyo iyo iskaashi qoto dheer oo lala yeesho Quwadaha Reer Bariga sida Shiinaha, Ruushka, Turkiga, Iraan iyo Hindiya,
Marka laga tago khataraha haatan ka taagan Geeska Afrika ee ay ugu horreeyaan dagaallada ka dhacaya Waddamada Itoobiya, Eretariya Sudan iyo Soomaaliya; halista ugu weyn ee ku soo fool leh Geeska Afrika waxay ka imanaysaa saddex hoggaamiye oo keligood-taliyeyaal dhiigyo cab ah, kuwaasoo ku bahoobay Saddex-xagal ay ujeedadiisu tahay Dibin-daabyada iyo Dhagar-wadareed Qorshaysan oo ku wajahan shucuubta ku wada nool Waddamada Gobolka Geeska Afrika.